नम्रताको जायराचाहिँ कहिले ? - मनोरञ्जन - नेपाल
नम्रता श्रेष्ठले प्रसाद भन्दा पहिल्यै सुटिङ सकेकी थिइन्, जायराको । यसमा उनले मार्सल आट्स खेलाडीका रुपमा काम गरेकी छन् । भूमिकालाई जीवन्त बनाउन कपाल छोटो बनाइन् । जायरामा उनको अभिनय मात्र होइन, लगानी पनि छ । तर कहिले प्रदर्शन हुने टुंगो छैन ? जबकी प्रसाद २१ मंसिरमा रिलिज हुँदैछ । फस्ट लुक सार्वजनिक कार्यक्रममाचाहिँ जायरा पनि मंसिरमै प्रदर्शन हुने जानकारी गराइएको थियो । निर्माताहरुबीच मनमुटाव भएकाले यस फिल्म पोस्ट–प्रोडक्सनमै अल्झिएको बताइन्छ । प्रसादको प्रमोशनमा व्यस्त नम्रता यसबारे खासै खोल्न चाहन्नन् पनि । लाग्छ, फिल्म ढिला हुँदा अपेक्षाकृत जस नपाउने भय छ उनलाई । सँगै एक दर्जन फिल्म प्रदर्शन हुँदा एउटै हिट नभएको पीडा त छँदैछ ।